Pemphigus Pemphigoid Foundation (IPPF) | tariro yakajairika isingawanzobatanidzwa
Kurarama NaP / P
Kunzwisisa P / P
Zvose Pamusoro Pemphigus (Mwoyo Murefu)
Patient Education Education Series
Bvunza A Coach
Natural History History (Murwere Registry)
Zvose Pamusoro Pemphigus (Physician Edition)
Matambudziko & Side Effects
Ikozvino Kubvumirana kwezvirwere Zvirwere
Kudzivirira & Psychology
Dzimwe Nzira Dzokupa
Kuenderera mberi Nezvokurapa Dzidzo
Simba A Fundraiser
Gore negore Mumiririri Makereke
Ndinofanira kuzvipira here?
Ndezvipi kodzero dzangu?
Kuva Mutevereri Wako
Iva Healing Hero
Vangave vari varwere, vemhuri, shamwari, vanochengetedza, vashandi vezvokurapa, kana zvirwere zvisingawanzovhiringidzi, zviratidzo zvedu zvekuporesa zvinosangana zvakafanana zvakafanana:
Hapana chirwere chisingawanzoitiki kurapwa.
Kuporesa Heroes kunopfuura mberi nekupfuura kutsigira sangano rePPF kuburikidza nekugadzirisa, zvipo zvepamwedzi kunotsigira basa redu rekuvandudza mararamiro ehupenyu kune avo vose vanobatwa ne pemphigus uye pemphigoid.
Iva Healing Hero Hero Nhasi!
Kunyanya pemphigus uye varwere ve pemphigoid havazivi mumwe munhu ane zvirwere izvi kusvikira vasangana ne IPPF community.
Batsira varwere kuziva kuti havasi ivo voga.
Enda kumusangano uye unoda zvakawanda?
Miss musangano wacho zvachose?
Inotsigirwa neNORD uye FDA, chidzidzo chitsva ichi chichaenderera mberi P / P tsvakurudzo nerubatsiro kubva kwamuri, murwere.
An IPPF News Site iyo iine yakakurumbira pamusoro pekuzivisa, kukurudzira, kurapa murwere, uye Foundation.
Vedu Vehutano Health Coaches vanopfuura kungova ruzivo rwemashoko, ivo varwere vakaita sewe.
Gamuchira rubatsiro rwakagadzirwa semuurwere, mutarisiri, nhengo yemhuri, kana shamwari.
Tsvaga nyanzvi yezvinyorwa zvakakurudzirwa, zvirwere uye ruzivo rwehutano, nezvimwe.
P / P Kuchengeta Purogiramu
Kuwedzera P / P kuziva kunokosha kuti kuderedze kuongororwa nguva uye kurapa kunonoka.
"IPPF nguva dzose inoratidzika kuti inondibatsira kudzokera shure" - Patricia, CA
"Mei Ling, Ndinokutendai zvikuru nokuda kwekunetseka kwenyu, uye kukurudzira Gore rakapera patakatanga kutaura, ndakanga ndiri munzvimbo yakasununguka." Kubva kumakurukota enyu, nemashoko akanaka. Ndakaramba ndichirwisana neizvi, uye ndisingagoni wakazviita pasina rubatsiro rwako. " - Ryan, CA
"Somumwe munhu achangobva (uye pakupedzisira!) Akaonekwa neMMP, Handikwanisi kutaura zvakakwana pamusoro paMei Ling Moore, mudzidzisi wevamwe vanoteerera uye anozivisa uye anotarisira zvikuru. Iri sangano rave riri vanamwari! "
"Sezvo mumwe munhu achangobva (uye pakupedzisira!) Akabatwa neMMP, handikwanise kutaura zvakakwana pamusoro paMei Ling Moore, mudzidzisi wevezera anoteerera uye anozivisa uye ane hanya zvikuru.Sangano iri rave riri vanamwari!"
"Zvave zvichibatsira kuziva kuti ndinogona kuwana rubatsiro rwePPF nevamwe vane zvimwe zvakafanana! Rimwe zuva ndinotarisira kupinda musangano wegore negore!"
"Zvave zvichibatsira kuziva kuti ndinogona kuwana rubatsiro rwePPF nevamwe vane zvimwe zvakafanana! Rimwe zuva ndinotarisira kupinda musangano wegore negore!" - Bonnie
"Pakutanga ndawana kuti ndabva muchipatara mushure memwedzi, ndakarashika uye ndakaora mwoyo.Ndiwe wakandibatsira panguva yakaipisisa yehupenyu hwangu .. Handina kumbozvitaura pamberi pevanhu.ZIVAWE nokuda kwekukurudzira kwako uye WOSE uchitiitira isu! "
"Pakutanga ndawana kuti ndabva muchipatara mushure memwedzi, ndakarashika uye ndakaora mwoyo.Ndiwe wakandibatsira panguva yakaipisisa yehupenyu hwangu .. Handina kumbozvitaura pamberi pevanhu.ZIVAWE nokuda kwekukurudzira kwako uye WOSE uchitiitira isu! " - Randi, FL
"Pandakatanga kuonekwa kuti nzvimbo nevatungamiri vakapindura mibvunzo yangu uye zvinonetsa, ndinoonga zvose zvatinowana.
"Pandakatanga kuonekwa kuti nzvimbo nevatungamiri vakapindura mibvunzo yangu uye zvinonetsa, ndinoonga zvose zvatinowana. - Peggy, OH
"Handigoni kuwana mazwi zvakare, ndinokutendai, nokuda kwebasa renyu rakanaka!"
"Koshesa basa rako rose rakaoma pakudzidzisa isu isu kunze uko tichitarisana nechirwere ichi chinoshamisa!"
"Koshesa basa rako rose rakaoma pakudzidzisa isu isu kunze uko tichitarisana nechirwere ichi chinoshamisa!" - Gary
"Guru guru remashoko, nekuti achangobva kuongororwa uye achidzokorora vanhu vane Pemphigus & Pemphigoid. Ndapota rambai muchiita basa rakanaka varume!"
"Guru guru remashoko, nekuti achangobva kuongororwa uye achidzokorora vanhu vane Pemphigus & Pemphigoid. Ndapota rambai muchiita basa rakanaka varume!" - Toni, UK
"Ndinofunga kuti ndiwo muponesi weupenyu kwatiri, zvinoshamisa kuti mumwe munhu ataure naye ane dambudziko iri zvakare." Kutsigira ndiyo mhinduro chete inotibatsira mupfungwa nepfungwa kuburikidza nechirwere ichi chinotyisa. "
"Ndinofunga kuti ndiwo muponesi weupenyu kwatiri, zvinoshamisa kuti mumwe munhu ataure naye ane dambudziko iri zvakare." Kutsigira ndiyo mhinduro chete inotibatsira mupfungwa nepfungwa kuburikidza nechirwere ichi chinotyisa. " - Pat, IA
"Handizivi kuti ndingadai ndakaita sei kunze kwewebsite ino.Vakandibatsira kutsvaga chiremba munharaunda yangu.Vadzidzisi vezera rangu vanotyisa! Ndivo vanhu vose vakave vakafanana nesu.Iye inozorodza kutaura nomumwe munhu iyo inozivikanwa nehosha yangu. "
"Handizivi kuti ndingadai ndakaita sei kunze kwewebsite ino.Vakandibatsira kutsvaga chiremba munharaunda yangu.Vadzidzisi vezera rangu vanotyisa! Ndivo vanhu vose vakave vakafanana nesu.Iye inozorodza kutaura nomumwe munhu iyo inozivikanwa nehosha yangu. " - Mia
"Inzvimbo yePIPF ine ruzivo rwakakosha kune chero munhu anotarisana nechirwere ichi.Ndakadzidza zvakawanda kubva panzvimbo iyoyo sezvandakaita kune vanachiremba.Vashandi vanobatsira zvikuru uye vanoisa hurukuro dzakanaka zvakanaka."
"Inzvimbo yePIPF ine ruzivo rwakakosha kune chero munhu anotarisana nechirwere ichi.Ndakadzidza zvakawanda kubva panzvimbo iyoyo sezvandakaita kune vanachiremba.Vashandi vanobatsira zvikuru uye vanoisa hurukuro dzakanaka zvakanaka." - Scott, IL
"Sangano iri rakanyanya kunaka uye rutsigiro, ndinoda kukurudzira zvikuru. Ichokwadi rakandibatsira !!!!"
"Sangano iri rakanyanya kunaka uye rutsigiro, ndinoda kukurudzira zvikuru. Ichokwadi rakandibatsira !!!!" - Vicki, NC
"Ndiri kuita zviri nani zvikuru nokuda kwePPF.Ndakave ndiri kurapwa kwevhiki uye ndinonzwa 100% zviri nani! Ndinoda kuonga IPPF, nokuti dai ndisina kuwana chiremba chekutsvaga chiremba ndakanga ndisina kuwana chiremba anogona kundibata zvakanaka. "
"Ndiri kuita zviri nani zvikuru nokuda kwePPF.Ndakave ndiri kurapwa kwevhiki uye ndinonzwa 100% zviri nani! Ndinoda kuonga IPPF, nokuti dai ndisina kuwana chiremba chekutsvaga chiremba ndakanga ndisina kuwana chiremba anogona kundibata zvakanaka. " - Keturah, NY
TARIDZA SHOKO RAKO
Tsigirai dzidzo yedu inokosha, kukurudzira, nekuedza kuziva nhasi!
Une chirwere, kurapwa, kana mararamiro emibvunzo?
Utano hwedu hwevevamwe Coaches varwere, zvakare. Vanopa ruzivo, ruzivo, uye kutsigirwa izvo zvisingagoni kuwanikwa kune imwe nzvimbo.
Ikozvino Pemphigus & Pemphigoid Weekly! paper.li/healourskin/13... Thanks kune @HealioEdLab @leowaxmderm @ImmunePC_Papers #raredisease
Ikozvino Pemphigus & Pemphigoid Weekly! paper.li/healourskin/13... Thanks kune @ced_wiley @TregCellRadar @MauiDerm #raredisease #rareleader
Ikozvino Pemphigus & Pemphigoid Weekly! paper.li/healourskin/13... Thanks kune @Biomedres01 @HealioEdLab @pooyabeigi #wateryblisters #lymphoma
Zvimwe zveC2017 zvinoratidza: 1,252 murwere / muteereri maitiro akavharwa; Misangano yeboka rekutsigira 17; 1,596 vadzidzi / faculty vanosvika ... twitter.com/i/web/status/9...
Pakutanga kuonekwa, varwere vakawanda havazivi ani zvake ane P / P. Vanowanzoti vanonzwa vasina tariro uye vari voga. twitter.com/i/web/status/9...
Imwe yenyika dzePemphigus & Pemphigoid Foundation inonyanya kukosha ndeyekupa varwere navanachiremba munyika yose vane ruzivo nezve pemphigus uye pemphigoid, uye kupa varwere nevatarisi vavo vanoda kunyaradzwa nekusigirwa kuitira kuti varambe vachirarama hune hupenyu hune hupenyu.
© 2017 International Pemphigus & Pemphigoid Foundation · Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Website yekugadzirisa nekugadziriswa ne Uptown Studios.